ဖေ့ဘွတ်ရဲ့ Community Standard ဆိုတာဘာလဲ (၂)? – Think Before You TRUST
Home>>ပညာပေး>>ဖေ့ဘွတ်ရဲ့ Community Standard ဆိုတာဘာလဲ (၂)?
တွေးပြီးမှယုံJune 22, 2019
Facebook Account တွေ ပျက်သွားတယ်။ Facebook Page တွေ ပျက်သွားတယ်။ ကိုယ့်ကို Facebook က အကောင့်တွေ ပေချ့်တွေကို ဖျက်ကြောင်း အကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့ Community Standard နဲ့ မညီတဲ့ ပိုစ့်တွေကို တွေ့လိုဆိုပြီး အကြောင်းကြားတာကို သိကြမှာပါ။ Community Standard ဆိုတာဘာလဲ (၂)? Facebook သုံးစွဲသူတွေဟာ ဘာတွေကို ပိုစ့်မလုပ်ဖို့ ရှောင်ကျဉ်ရမှာလဲဆိုတာကိုသိဖို့ တွေးပြီးမှယုံက ဖေ့ဘုတ်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စံနှုန်းတွေအကြောင်းကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ အကောင့်တွေ၊ ပေချ့်တွေ မပျက်ရအောင် ဘယ်လိုစံနှုန်းတွေကို မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမယ်ဆိုတာကို တခြားသူငယ်ချင်းတွေသိအောင် အောက်ကလင့်မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါအုံးနော်။
(၇) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို လေးစားပါ
Facebook က သတ်မှတ်ထားတဲ့ နံပါတ်ခုနှစ် စံနှုန်းက သူများရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို လေးစားဖို့ပါ။ ဥပမာ ဒီစကီလေးလန်းတယ် သူ့ဖုန်းနံပါတ်က ဘယ်လောက် ဘယ်လောက်ပါဆိုပြီး နှာဗူးကျကျပိုစ့်တွေတင်တာမျိုးကို Facebook က မကြိုက်ပါဘူး။ နောက်ပြီး သူများနာမည်နဲ့ အကောင့်ဖွင့်တာတို့၊ သူများပုံယူသုံးပြီး အကောင့်ဖွင့်တာတို့ကို ဖေ့စဘုတ်က သိရင်လည်း အရေးယူပါတယ်။ (စကားမစပ်ဗျို့ အဲ့လို သူများရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေကို ယူသုံးတာကို ဖေ့ဘုတ်တင်မကဘူး ကျတော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဥပဒေအရလည်း တားမြစ်ထားတယ်။ သိရင် ဂျေးထဲအောင်းတတ်တယ်နော်။ မသိသေးတဲ့ ဘော်ဒါတွေတွေ့ရင်လည်း သတိလေးဘာလေး ပေးလိုက်ပါအုံး) ဆက်ပြောရရင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်ဆိုတာ ဓာတ်ပုံတွေ ဖုန်းနံပါတ်တွေတင်မဟုတ်ဘူးနော် နေရပ်လိပ်စာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ မိဘနဲ့ သက်ဆိုင်ရာသူတွေ စတာတွေ အကုန်ပါပါတယ်။ အဲဒီတော့ Facebook အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ သူများရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ဖေ့စဘုတ်ကြီးလို လေးစားကြပါစို့။
ဒါကတော့ ဖေ့ဘုတ်သုံးစွဲနေတဲ့ လူတိုင်း ခဏခဏကြုံနေရတဲ့ ကိစ္စပဲ။ အဲ့ဒါက ဘာလည်းဆိုတော့ ပိုင်ရှင်ကို အသိမပေးပဲ ခွင့်မတောင်းပဲနဲ့ စာတွေ၊ ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကို ကိုယ်ပဲရေးသလိုလို ပြန်တင်ကြတာပါ။ တချို့ရှိသေးတယ် ခရက်ဒစ်ဆိုတာပဲ ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကို ခရက်ဒစ်ပေးတယ်ဆိုတာ မပါဘူး။ အမည်မသိ ခရက်ဒစ်တဲ့ အံ့သြဘ။ အဲ့လို စာသူခိုး၊ ပုံသူခိုး၊ ဗီဒီယိုသူခိုးတွေကို ဖေ့စဘုတ်က ခွင့်မလွှတ်ပါဘူး။ သူများရဲ့ သီချင်းတီးလုံးကအစ ခွင့်မပြုထားရင် ဖေ့စဘုတ်မှာ တင်လို့မရပါဘူး။ အကယ်၍ တင်လို့ကတော့ ဖေ့စဘုတ်ကြီး သိသွားရင် အဲဒီ ပိုစ့်ကို ဖျက်ပစ်ပါတယ်။ ဒီမူပိုင်ခွင့်ကို အလေးထားဖို့က အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ အက်ဒမင်တို့ တိုင်းပြည်မှာ တရားဥပဒေသာစိုးမိုးလို့ကတော့ ပိုင်ရှင်ကို ခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲ တင်မိရင် ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးလျော်ရမှာနော်။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့ကစပြီး သူများရဲ့ စာတွေ၊ ပုံတွေ၊ သီချင်းတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ ယူတင်မယ်ဆိုရင် ဖေ့စဘုတ်ရဲ့ နံပါတ်ရှစ် စံနှုန်းအရ မူရင်းပိုင်ရှင်ဆီက ခွင့်ပြုချက် တောင်းကြပါစို့။
(၉) ထိန်းချုပ်ကုန်စည်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ မရောင်းရ
ခုနောက်ပိုင်း ဖေ့စဘုတ်ပေါ်ကနေပြီး ငပိကြော်ကအစ တိုက်ခန်း အလည် စိန်အဆုံး အကုန်လုံး အရောင်းအဝယ် ဖြစ်နေကြတာကို သူငယ်ချင်းတို့လည်း တွေ့ကြမှာပါ။ ဒီလိုမျိုး ရောင်းသူနဲ့ ဝယ်သူ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့ဆိုတာကိုက ဖေ့စ်ဘွတ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဖေ့စဘုတ်ပေါ်မှာ နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ကုန်စည်တော့ ရောင်းလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ သေနတ်တို့ မူးယစ်ဆေးတို့ကို ဖေ့စဘုတ်ကနေ ရောင်းမယ်ဆိုပါစို့ သိရင်ဘန်းပါတယ်။ ကံမကောင်းရင် ဂျေးထဲအောင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဖေ့စဘုတ်က အဲ့လိုမျိုး ပေါက်ကရတွေရောင်းဝယ်တာကို အာဏာပိုင်တွေဆီ သတင်းပေးတတ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ဖေ့စဘုတ်ပေါ်ကနေပြီး အသီးပစ်တာတို့ ဝိရောင်းတာတို့ မလုပ်ရဘူးနော်။ အင်းစိန်တောရ ရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်။
(၁၀) အချက်အလက်များခိုးယူခြင်းနှင့် စပမ်းမေလ်းပို့ခြင်းမပြုရ
Malware တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နောက်ရက်ကျရင် Admin တို့ တင်ပါအုံးမယ်။ အဲဒီ Malware တွေနဲ့ အကောင့်ခိုးတာကို ဖေ့စ်ဘွတ်က လက်မခံပါဘူး။ အခုတော့ spam mail အကြောင်းပဲ အရင်ပြောမယ်နော်။ သူငယ်ချင်းတို့ ကြုံးဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်သူငယ်ချင်းဆီကလိုလို အရေးကြီးသလိုလိုနဲ့ ကိုယ်လည်းမသိတဲ့နေရာတွေကနေပြီး မေလ်းတွေ ဝင်တာကို စပမ်းမေလ်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ တချို့က သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ကြေညာချင်လို့ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို သုံးစေချင်လို့ ပို့တာမျိုးတွေပေါ့။ အဲ့လို ပို့တာကို ဖေ့စဘုတ်က တားထားပါတယ်။ လက်မခံပါဘူးနော်။ ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့ စံနှုန်း (၁၀) ပါ။
(၁၁) သင့်လုံခြုံရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အလေးထားသည်
ဒါကတော့ ဖေ့စဘုတ်က Admin တို့တွေကို ပြောချင်တာပါ။ သူတို့က သူငယ်ချင်းတို့လို Admin တို့လို ဖေ့စဘုတ်ယူဇာတွေ အားလုံးရဲ့ လုံခြုံရေးကို အလေးထားပါတယ်တဲ့။ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို အထူးအလေးထားပြီး ကာကွယ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ကိုလည်း သူတို့လိုမျိုး တခြားသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို လေးစားပေးပါတဲ့။ ဖေ့စဘုတ်ကြီးက လုံခြုံရေးအတွက် မေတ္တာရပ်ခံထားတာပါနော်။ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ စံနှုန်း (၁၁) ပါ။
(၁၂) ရိုင်းစိုင်းမှုများကို တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်
ဒါကတော့ နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ်ပေါ့လေ။ ဒီမှာကတော့ သူပြောချင်တာ ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ အပေါ်က စံနှုန်းတွေကို မလိုက်နာဘူးလို့ ထင်ရင် ထင်ရတဲ့ ပိုစ့်တွေကို Report ကျွေးလိုက်ပါတဲ့ (Report မထုတတ်ရင် ဒီ Page မှာ တင်ထားတာတွေ ရှိတယ်နော်။ အကယ်၍ မသိဘူးဆိုရင် Admin တို့ကို မက်ဆေ့မှာ တိုးတိုးလေး လာမေးလို့ရတယ်နော်)။ အဲဒီလို Report လုပ်ဖို့ကိုလည်း ဖေ့စဘုတ်က အားပေးထားပါတယ်။ ဆိုတော့ ပေါက်ကရတွေတွေ့ရင် Report သာထုပါလို့….. အဆုံးထိဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ဖေ့စဘုတ်ရဲ့ စံနှုန်းတွေကို သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မျှဝေလိုက်ပါအုံးနော်။